June 2017 ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ဆရာများ ဖမ်းဆီးခံရ၍ မဲဆောက်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာစာသင်ကျောင်းအချို့ ယနေ့စတင်ပိတ်မည်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Thursday, June 29, 2017 လက်ရှိထိုင်းသတင်း No comments
မဲဆောက်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာစာသင်ကျောင်းမှ မြန်မာကျောင်းသားကလေးငယ်များကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − Migrant Teachers Facebook)
တရားမဝင်အလုပ်လုပ် ကိုင်နေသူများကို ထိုင်းအာဏာ ပိုင်များက ဖမ်းဆီးရာတွင် မဲ ဆောက်မြို့ရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း ကလေးများအား ပညာသင်ကြား ပေးနေသော ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများ ဖမ်းဆီးခံရ၍ မဲဆောက်မြို့ရှိ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာစာသင် ကျောင်းအချို့ကို ယနေ့ (ဇွန်လ ၂၉ ရက်)ကစ၍ ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ ဆရာမများ အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ရွှေစင်ဝင်းကပြောသည်။
မဲဆောက်မြို့တွင် မြန်မာကလေးငယ်များအား ပညာသင်ကြားပေးနေသော ရွှေ့ပြောင်းစာသင်ကျောင်း ၆၈ ကျောင်းရှိပြီး ဆရာ၊ ဆရာမဦးရေ ၇၀၀ ခန့်ရှိရာ ဇွန်လ ၂၉ ရက်ကစ၍ စာသင်ကျောင်းငါးကျောင်း စတင်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖမ်းဆီးမှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါက အခြား စာသင်ကျောင်းများလည်း ပိတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆရာမဒေါ်ရွှေစင်ဝင်းက 7Day Daily သတင်းစာအားပြောသည်။
‘‘ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပေါ့ နော်။ တနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးတော့ လေးယောက် အဖမ်းခံရတယ်။ မဲ ဆောက်မြို့တွင်းမှာပဲ။ တခြား မြို့နယ်တွေမှာတော့ မသိရသေး ဘူး။ ကျွန်မတို့ တခြားထုတ်ပြနိုင်တာက ရွှေ့ပြောင်းပညာသင်ကြား ရေးစင်တာက ဆရာဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နဲ့တစ်ဆင့် ပြန်လုပ်ပေးတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းတွေ မှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆရာဖြစ် ကြောင်းဆိုတဲ့ ထိုင်းပညာရေးဌာန က ထုတ်ပေးတဲ့ ကတ်ကလေးရှိ တယ်။ ဒီနှစ်ကတ်လုံးကို အရင် တုန်းက ပြရင် သွားလို့ရတယ်။ ကျောင်းကိစ္စနဲ့ အပြင်ထွက်ထွက်၊ ဘယ်သွားသွားရတယ်။ သို့သော် လည်း ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ ဘယ်လိုမှ ဒီလက်မှတ်ပြလည်း မ ရဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက လုံ ခြုံမှုမရှိတော့ဘူး’’ဟု၎င်းကပြော သည်။
ဇွန်လ ၂၈ ရက်တွင် မဲ ဆောက်မြို့ရှိ မြန်မာကလေးငယ် များကို ပညာသင်ကြားပေးသည့် လှိုင်းသစ် ပညာသင်ကျောင်းမှ ဆရာတစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရ၍ ယင်း ကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာ ဦး ဇော်ထက်က ထိုင်းရဲစခန်းသို့ သွားရောက်မေးမြန်းရာ အဆိုပါ ကျောင်းအုပ်ဆရာကိုလည်း ထပ် မံဖမ်းဆီးထားကြောင်း ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ ဆရာမများအစည်းအရုံးက ဇွန်လ ၂၈ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
‘‘မနက်အစောကြီး လာဖမ်း ကြတယ်။ ကျောင်းသားကလေး တွေမိဘတွေလည်း အများကြီးအ ဖမ်းခံထိတယ်။ မိဘတွေက သူတို့ ကလေးတွေကျောင်းတွေကိုထား ပြီး လိုက်သွားရတယ်။ အဲဒီမှာက လေးတွေက ကျောင်းတွေမှာနေ နေရတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက ဒီကလေးတွေရဲ့ လုံခြုံမှုအပြင်သူ တို့ရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချမှုကိုပါ စိုးရိမ်နေရတယ်’’ဟု ဒေါ်ရွှေစင်ဝင်းက ပြောသည်။
မဲဆောက်ရှိ မြန်မာရွှေ့ ပြောင်း စာသင်ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသားကလေးငယ် ၁၄,၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ ဆရာမများ အစည်းအရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဆရာ၊ ဆရာမအားလုံးသည်ထိုင်းပညာရေးဌာနက ထုတ်ပေး သည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာ ကတ်သာရှိပြီး လတ်တလောဖမ်း ဆီးမှုကြောင့် နေရပ်သို့ပြန်ရန်မှာ စာသင်လက်စကလေးများရှိနေ၍ အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့် ၎င်း တို့ ကိုင်ဆောင်ထားသော စေတ နာ့ဝန်ထမ်းကတ်ကို ထိုင်းအစိုးရ က အသိအမှတ်ပြုရန် လိုလားနေ ကြသည်။
ထိုင်းအစိုးရသည် နိုင်ငံခြား သားအလုပ်သမားများ၏ အလုပ် တာဝန်စီခံခန့်ခွဲရေး အက်ဥပဒေ စီမံချက်အရ တရားမဝင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေထိုင်နေသော နိုင်ငံ ခြားသား အလုပ်သမားများကို ဒဏ်ငွေ ဘတ်နှစ်ထောင်မှ လေး သိန်းအထိနှင့် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ် အထိ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ဇွန်လ ၂၀ ရက်တွင် ကြေညာပြီး ဖမ်းဆီးမှု များ အရှိန်မြှင့်နေသည်။
29.06.2017 ​နေ့ ၂ နာရီ အထိ ကျား ၁၄၅၇ မ ၉၂၈ စုစု​ပေါင်း ၂၃၈၅ ဦး ပြည်​​တော်​ပြန်​ဝင်​လာကြပါတယ်
ပြည်​​တော်​ပြန်​မြန်​မာလုပ်​သားများကို မြဝတီ ၉၉၉ ဂိတ်​
တွင်​ ဌာနဆိုင်​ရာတာဝန်​ရှိသူများ နယ်​ခြား​စောင့်​တပ်​
BGF တပ်​ဖွဲ့များ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများမှ ​နွေး​ထွေးစွာ
ယနေ့ မြဝတီ ၉၉၉ ဂိတ် သို့ ရောက်ရှိလာသော ထိုင်းမှ ပြည်တော်ပြန် ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အစိုးရဌာနဆိုင်​ရာ
တာဝန်ရှိသူ​များ ခရိုင်​မှုး မြို့နယ်​မှုးများ လဝကအရာရှိများ
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ​​နယ်​ခြား​စောင့်​တပ်​ဖွဲ့ဝင်​များ ပရဟိတအဖွဲ့
များက ​နွေး​ထွေးလှိုက်​လှဲစွာကြိုဆိုခဲ့သလို အ​ကျွေးအ​မွေး
များဖြင့်​လည်း ဧည့်​ခံခဲ့ပြီး အိမ်​ပြန်​ချင်​သူများအား ကားခ
မြန်​မာလုပ်​သားများအ​နေဖြင့်​ စိတ်​မပူကြပါနဲ့ ​ငြိမ်းချမ်းစွာ
ပြန်​လာကြပါ နယ်​စပ်​မြဝတီ ၉၉၉ ဂိတ်​မှလည်း အခ​ကြေး
​နေ့ ၂ နာရီ အထိ ကျား ၁၄၅၇ မ ၉၂၈
စုစု​ပေါင်း ၂၃၈၅ ဦး ပြည်​​တော်​ပြန်​ဝင်​လာကြပါတယ်​။
ပုံ . မြဝတီ ၉၉၉ ဂိတ်​တွင်​ အိမ်​ပြန်​မြန်​မာလုပ်​သားများအား
တာဝန်​ရှိသူများက ​နွေး​ထွေးစွာ ကြိုဆို​နေကြစဉ်​
Credit to Nyeinn Chann Ko Ko
ထိုင်းတွင် အထောက်အထားမရှိ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေရပ်ပြန်ရန် မြန်မာသံရုံး ထုတ်ပြန်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, June 27, 2017 လက်ရှိထိုင်းသတင်း No comments
Byငြိမ်းချမ်း. Tuesday, June 27, 2017
တရားမဝင်လုပ်သားများ နှင့်ပတ်သက်၍ ထိုင်းအစိုးရက လက်ရှိထုတ်ပြန်သည့် ဥပဒေသစ် သည် ပြစ်ဒဏ်ကြီးလေး၍ ထိုင်း နိုင်ငံတွင် အထောက်အထားလုံးဝ မရှိဘဲ နေထိုင်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရန် ထိုင်း နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးက ဇွန်လ၂၆ ရက်တွင် သတိပေး ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
ထိုင်းအစိုးရသည် နိုင်ငံခြား သား အလုပ်သမားများ၏ အလုပ် တာဝန် စီမံခန့်ခွဲရေး အက်ဥပဒေ စီမံချက်အရ တရားမဝင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေထိုင်နေသော နိုင်ငံ ခြားသား အလုပ်သမားများကို ဒဏ်ငွေ ဘတ်နှစ်ထောင်မှ လေး သိန်းအထိနှင့် ထောင်ဒဏ် ငါး နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ထိုင်း အစိုးရက ဇွန်လ ၂၀ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ယင်းကြေညာချက်နှင့်ပတ် သက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ သံရုံးရှိ အလုပ်သမားသံအရာရှိ ရုံးက ထိုင်းရောက် မြန်မာရွှေ့ ပြောင်း လုပ်သားများနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်ပါအတိုင်း သတိပေးထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးမိုးအောင်ခိုင်က ဇွန်လ ၂၆ ရက်ညတွင်ပြောသည်။
လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပန်းရောင် ကတ်၊ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် များ ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး မိမိတို့ လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် (Work Permit) ပြုလုပ်ထားရန်နှင့် လက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော အ လုပ်ရှင်နှင့် မိမိကိုင်ဆောင်ထား သည့် အလုပ်ပါမစ်ပါ အလုပ်ရှင် မတူညီပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အလုပ်သမားရုံးများတွင် သွား ရောက်ပြောင်းလဲကြရန် မြန်မာသံရုံးထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထား သည်။
ထို့အပြင် ဗီဇာသက်တမ်းရှိ ပြီး ပါမစ်မရှိသေးသော အလုပ်သမားများသည် လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အလုပ်သမားရုံးတွင် သွားရောက်ပြုလုပ်ရန် တိုက် တွန်းထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်သူများကို ထိုင်းအစိုးရက ဖမ်းဆီးနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာလုပ်သားများ ဖမ်းဆီး မခံရစေရေး စာရွက်စာ တမ်း အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာယူဆောင်သွားလာနေထိုင် ကြရန် ထိုင်းရောက်မြန်မာအဖွဲ့ အစည်းများကလည်း သတိပေး တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
‘‘တရားမဝင် နေထိုင်တဲ့သူ တွေ အကုန်ပြန်ကြတာကောင်း မယ်။ ပြန်ပြီး MoU နဲ့ပြန်လာ။ သူ များနိုင်ငံက ဥပဒေထုတ်ထားရင် တော့ လေးစားလိုက်နာရမယ်။ တရားဝင်နဲ့ လာနေတာ အဆင် ပြေတယ်။ အခုက သူတို့ထုတ် ထားပြီးသွားပြီ။ အဲဒီတော့ အဖမ်း ခံရတာတွေ မဖြစ်ရအောင် ပြန် ကြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ’’ ဟု ဦးမိုးအောင်ခိုင်က 7Day Daily အား ပြောကြားသည်။
ထိုင်းအစိုးရ၏ ကြေညာချက်တွင် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား များအတွက် တားမြစ်ထားသော အလုပ်များနှင့် အလုပ်ပါမစ်မရှိ သော အလုပ်သမားများကို ငှားရမ်းလက်ခံထားသည့် အိမ်ရှင်သူဌေးများသည် ဘတ်ငွေလေး သိန်း (ကျပ်သိန်း ၁၆၀ ကျော်)မှ ဘတ်ငွေရှစ်သိန်း (ကျပ်သိန်း ၃၂၀ ကျော်)နှင့် အလုပ် သမား၏ အလုပ်ပါမစ် အပါအဝင် ကိုယ် ပိုင်စာရွက်စာတမ်းများကို သိမ်းဆည်းထားသော အလုပ်ရှင်များကို ဒဏ်ငွေ ဘတ်တစ်သိန်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ခြောက်လချမှတ်ခံရမည်ဟု ကြေညာထားသောကြောင့် ထိုင်းအလုပ်ရှင်များက စိုးရိမ်နေကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်မြို့ အခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးကွန်ရက် (MWRN) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ဌေးက ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်သူများ နှင့်ပတ်သက်၍ ဇွန်လ ၂၀ ရက် က အက်ဥပဒေထွက်ရှိပြီး အဆိုပါ နည်းဥပဒေကို ထိုင်းအစိုးရက ဇွန်လ ၂၃ ရက်တွင် မြန်မာသံရုံး သို့ ပေးပို့ထားကြောင်း ဦးမိုးအောင် ခိုင်က ပြောကြားထားသည်။
နည်းဥပဒေ ထွက်ရှိပြီး နှစ် ရက်အကြာ ဇွန်လ ၂၂ ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီနယ်မြေရှိ တရားမဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား ၃၀၀ ခန့်ကို ထိုင်းစစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က စတင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၂၃ ရက်ကလည်း ဘန်ကောက်မြို့ရှိ MBK ကုန် တိုက်တွင် တရားမဝင်အလုပ်လုပ် ကိုင်နေသော မြန်မာလုပ်သားများ ကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရာ မြန်မာလုပ်သား ၁၀၀ ခန့်ဖမ်းဆီး ခံရကြောင်း ဦးမိုးအောင်ခိုင်က ပြောသည်။ ဇွန်လ ၂၆ ရက်အထိ တရားမဝင် မြန်မာလုပ်သား ၅၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာလုပ်သား လေးသန်းရှိနေကြောင်း မြန်မာ လုပ်သားအရေး ဆောင်ရွက်ပေး သော အဖွဲ့များက ခန့်မှန်းထား သည်။ အများစုသည် တရားမဝင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ နောက်ပိုင်းမှသာ တရားဝင် သွားရောက်လုပ်ကိုင် ခြင်းဖြစ်သည်။
©7 Day News Journal....
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, June 20, 2017 NoBootable Device Error No comments
Method 1: Run Startup Repair from Windows Recovery Environment (WinRE)To run Startup Repair from the Windows Recovery Environment (WinRE), follow these steps:
In the System Recovery Options dialog box, select Startup Repair.For more information about System Recovery Options, see What are the system recovery options in Windows?
Method 2: Rebuild the boot configuration data (BCD) from Windows Recovery Environment (WinRE)To rebuild the boot configuration data (BCD) from Windows Recovery Environment (WinRE), follow these steps:
Type Bootrec /RebuildBcd, and then press ENTER.For more information about how to use Bootrec.exe, see How to use the Bootrec.exe tool in the Windows Recovery Environment to troubleshoot and repair startup issues in Windows.
Select Finish to restore the system.For more information about how to use System Restore, see System Restore: frequently asked questions.
Credit to https://support.microsoft.com/en-us/help/2622803/bootmgr-is-missing-press-ctrl-alt-del-to-restart-error-when-you-start-windows
Windows 10 မှာ Log in Password ကို Remove လုပ်နည်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, June 20, 2017 removepasswordOS10 No comments
အလင်းသစ်လဲ အလုပ်ပါးပြီး WiFi ကလဲပျက်နေတဲ့အတွက် Posts အသစ်
တွေ မတင်ဖြစ်ခဲ့ပါ။Post အသစ်တင်သည်ဖြစ်စေ၊မတင်သည်ဖြစ်စေအမြဲ
အခု လောလောဆယ်လူသုံးအတော်များလာတဲ့ Windows 10 မှ Log in
Password ကို ဖျောက်နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖုန်းဆက်ပြီး မကြာခဏမေးနေတဲ့ ညီငယ်များအတွက်ရော၊ကျန်မသိသေး
(အလျဉ်းသင့်သလို Windows 10 Speed Up လုပ်နည်း၊ဘယ်လို Antivirus
တွေကို ပို့စ်အဖြစ် တင်ပေးသွားပါမှာ။)
Windows 10 သုံးတဲ့သူအတော်များများ ကွန်ပြူတာဖွင့်လိုက်ရင် Log in
ဝင်ဘို့ Password ရိုက်ရတာကိုအတော်စိတ်ပျက်တတ်ကြပါတယ်။ဘယ်လို
ဖျောက်ရမလဲ မသိတော့ တခါဖွင့်တခါ Password ရိုက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ Windows 10 ရဲ့ Run(Search Box) မှာ netplwiz လို့
ရိုက်လိုက်ပါ။တက်လာတဲ့ netplwiz ကိုကလစ်ပါ။(ပုံကိုကြည့်ပါ)
ဖွင့်လိုက်တဲ့ netplwiz ဘောက်မှ ပုံမှာပြထားတဲ့အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်
လိုက်ပါ။ပြီးရင် Apply ကိုကလစ်ပါ။
အောက်က ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ User Name နဲ့
Password ကို ရိုက်ပါ။ပြီးရင် OK ကိုကလစ်ပါ။ပြီးရင်အဲဒီဘောက်ကိုပိတ်
Restart (သို့မဟုတ်) Shutdown လုပ်ပြီး ကွန်ပြူတာကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။
User Name နာမည်ပေါ်လာပြီး Password ရိုက်စရာမလိုဘဲ အော်တိုပွင့်
Credit to အလင်းသစ်နံနက်ခင်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Sunday, June 18, 2017 Office, Office2016 No comments
Download Microsoft Office 2016 Pro Plus v16.0.4498.1000 Actived + Portable March 2017 Free | Microsoft Office 2016 Pro Plus v16.0.4498.1000 isaversion of the Microsoft Office productivity suite, succeeding both Office 2013 and Office for Mac 2011. It was released on OS X on9July 2015 and on Microsoft Windows on 22 September 2015 for Office 365 subscribers. Mainstream support ends on 13 October 2020, and extended support ends on 14 October 2025, the same time as Windows 10. New features in the Windows release include the ability to create, open, edit, and save files in the cloud straight from the desktop,anew search tool for commands available in Word, PowerPoint, Excel and Outlook named “Tell Me”, more “Send As” options in Word and PowerPoint, and co-authoring in real time with users connected to Office Online.
Other smaller features include Insights,afeature powered by Bing to provide contextual information from the web,aDesigner sidebar in PowerPoint to optimize the layout of slides, new chart types and templates in Excel (such as treemap, sunburst chart (also known asaring chart), waterfall chart, box plot and histogram, and financial and calendar templates), new animations in PowerPoint (such as the Morph transition), the ability to insert online video in OneNote, andadata loss prevention feature in Word, Excel, and PowerPoint. Microsoft Office 2016 cannot coexist with Microsoft Office 2013 apps, but it can coexist with earlier versions of Microsoft Office, such as 2003, 2007, and 2010. Microsoft offers to freely replace these older 2013 versions with an updated version.
Microsoft Office 2016 Pro Plus v16.0.4498.1000 Features:
Work together on documents by improved version history to refer back to snapshots ofadocument during the editing process.
Review, edit, analyze, and present your documents across any of your devices (Windows, Mac, Android, iOS)
Fact-check terms you highlight and other contextual information in the document by Bing-powered Smart Lookup
Easily save office document to OneDrive cloud storage
Integrated with Windows 10 (Hello command, Cortana and Office Mobile Apps)
Download 32-bit Version – 2.06 GB
Download Office 2016 – 700 MB – Part 1
Download Office 2016 – 700 MB – Part 2
Download Office 2016 – 700 MB – Part 3
Download Office 2016 – 14 MB – Part 4
Download 64-bit Version – 2.37 GB
Download Office 2016 – 336 MB – Part 4
Download Office 2016 – 1 GB New
Collection of Office Activators
Credit to https://downloadfreeaz.com/
၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, June 17, 2017 Education No comments
အထက ကျိုက္ခမီကျောင်းနှင့် အထက (ခွဲ) နှစ်ကိုင်းကျောင်း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း နှင့်
မွန်ပြည်နယ် ၂၀၁၇ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်မှုအခြေပြဇယား
မိုဘိုင်းဖုန်း App ကနေ ကြည့်နိုင်မယ့် ဆယ်တန်း အောင်စာရင်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Friday, June 16, 2017 Education No comments
၂၀၁၆-၁၇ ခုနှစ်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုထားသူတွေအတွက် အောင်စာရင်းကို မိုဘိုင်းဖုန်း App ကနေတစ်ဆင့် ကြည့်နိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီ App ကနေ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီခွဲမှာ အောင်စာရင်းတွေကို ထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးမှာ ဖြေဆိုထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်းသား၊ သူတွေရဲ့ အောင်စာရင်းကိုပါ ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
"Results of the matriculated 2017"လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ App ကို Play Store မှာဆိုရင်
Download in Play Store မှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
အောင်စာရင်းတွေကို ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ် ဦးစီးဌာနရဲ့ Website ဖြစ်တဲ့ http://www.moe.gov.mm/?q=exam-result-2017 မှာလည်း ဇွန်လ ၁၇ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီ အချိန်မှ စတင်ပြီး ကြည့်နိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်တွေမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအလိုက်လည်း ခွဲခြား ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Credit to Emily (ရိုးရာလေး)
ဖုန်းထဲတွင် Play store မရှိသူများအတွက်
အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းလော့ဆွဲနိုင်ပါသည် ခင်ဗျာ
ပုံအတိုင်း Download ကိုနှိပ် ပြီးရင် အော်တို ဒေါင်းနေလိမ့်မယ်
ပြီးရင် com.it4youmm.exa...apk လေးရလာမယ်
ပြီးရင် install လုပ်လိုက်နော်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Friday, June 16, 2017 Lottery No comments
၃လုံးဂဏန်း ၁၄၂ ထွက်သွားပါပြီး။